Iingcamango Zenkxaso Zincinci kunye neBabriget
Iingcamango zezipho ezingabizi kakhulu zengcali kubomi bakho.
Ufuna ukuthenga isipho esincinci okanye esingabizi kumculi ebomini bakho? Nantsi iqoqo leengcamango zesipho esifanelekileyo njengoko i-workshop iveza okanye i-Christmas stocking fillers, ngenxa yokuzalwa okanye nasiphi na isiganeko ofuna ukusithi "Ndiyakuthanda" kumculi. (Ukuba uthengisa kwi-line, kunokukuhlawula ukuba uthenge izinto ezininzi kwaye ugcine elinye ixesha, ukugcina kwiindleko zokuposa / zokuthumela.)
Umfanekiso © Marion Boddy-Evans
Ulibale uphethe i-brush kunye nesitya esahlukileyo samanzi, sithwala i-waterbrush! Ungayisebenzisa ngamanzi epensela kunye neepensele zamanzi ezinqumlezileyo, kwaye kunene ukukhangela okanye ukuqhuba uphando lwangaphandle, kunye nokubuyela kwi-studio.
• Indlela yokusebenzisa i-Brush Water
Izikhonkwane Zamafutha (iisethi okanye iimboli zomntu ngamnye)
Ifoto © 2009 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Iimboli zeoli zifana neefelesi zeoli. Bakhulu (ngokukodwa xa uthenga i-extra-big!), Ngakumbi ukunyamezela kunye nobuncwane ukuze uzive uhluke kakhulu ukuba usebenze kunye, kwaye zome (ngokupheleleyo, emva kweenyanga ezimbalwa, njengepeyinti yeoli). Ama-oilsticks akuvumela ukuba udibanise ngokukhawuleza kokudweba ngemibala enamandla yeepende zeoli, unike iindlela ezintsha zokuziveza.
Inkqubo yePrush Pen
Ipenki yebrashi ifana ne-waterbrush ezaliswe ngeyinki. Ndinomntu omnyama (i-Pentel Color Brush) endiyisebenzisayo endaweni yesipeni xa ndicwangcisa ukubunjwa okanye ukukhangela (kunye 'nombala' usebenzisa i-waterbrush yam kunye ne-encoder). (Ii-Refill zikhoyo.)
I-Texture Medium kwiA acrylic kunye namafutha
IGeleria Mineral Texture I-gel iqulethe i-granules ye-pumice emhlophe. Ifoto © 2009 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Uluhlu oluhlukeneyo lweempahla luqulethe izinto ezahlukeneyo, ukusuka kwipumice ukuya kwiiglasi. Khawucinge nje ukuba uququzelele "umxhesho wesanti" kwindawo yokuhlamba okanye "idolophini" kwisixeko sase-cityscape ... yilokho uhlobo lwamathuba okuthungula okukhoyo. Isipho esipheleleyo somculi ofuna ukuhlolisisa iimpahla okanye ukuhambisa isitayela sokudweba kwindlela entsha.
Ukuba usebenzisa iiprikisi ze-acrylic, umxube wokuthutha unokuxutywa kunye nopende okanye usetyenziswe ukudala ukuthambisa ngaphambi kokuba uqale ukupenda. Abapendeli be-oyile bangasebenzisa i-acrylic texture medium as layout base ngaphambi kokuba baqale ukupenda.
Ubhanqa bePaint Paint
Thatha umzobo wesinwe kwinqanaba elilandelayo kunye nebhashi ephosa ekupheleni komnwe wakho njengokwakho. Imibala eyahlukileyo ibukhulu obuhlukeneyo (ubuncinci, obuphakathi, obukhulu, obanzi obukhulu), ngoko ke kufuneka ufumane ubuncinane obufanelekileyo. Ukuba nombhobho kuyo yonke iminwe emihlanu kuya kuqiniseka ukuba uvavanyo lwakho lokuxhamla! I-brly of the brush finger is synthetic; Bafika kwindawo ebukhali ukuze udwebe imigca emihle xa ungacinezeli kanzima.
Ifoto ngokukhawuleza yeBlick.com
Awuyi kulahla i-sweet wrapper kwi-pavement, ngoko-ke ungenzi okufanayo kunye ne-pencil shavings xa uphumelele kwi-sketching kwindawo. Ewe, unokuphikisana nomsebenzi wokuhlaziywa kwezinto eziphilayo, kodwa kusekhona i-litter ngokwenene. Kunoko uthabathe ekhaya nawe usebenzisa ubukhali beepencil ephakamileyo ephakamileyo.
Zingaphi iimbhobho eziphazamisayo zepenciliti okanye ipensela yombala zikhwela kwibhokisi lakho lobugcisa? Ungalokothi ubalekele kwaye uphazamiseke ngepenciliti emfutshane kakhulu, okanye uzive uchithe ngokukhupha. Yibambelele kule penisil ekhulayo kwaye iguqulelwe kwangoko ibe ipencil ukuba ubude obufanelekileyo bokusebenzisa ngokulula.
Gcina zonke iintlobo zakho zokubethelela ndawonye kwibhubhu yebhayisiki. Unesivalo ukuze uvalwe xa uhambisa izityhuthi zakho naphi na, kwaye emva koko kwi-studio, unokushiya isithintelo ukuze nayiphi na iibhulashi ezinamanzi ezinomileyo.
Enye into engalungelekanga kukuba ukuba unayo ityhubhu kwi-daypack yakho, iyancipha xa uhamba ngapha nangaphandle kokuba ufumene i-jam-packed with brushes okanye ubeke intsimbi encinane kuyo. Ukuba oku kunokukucaphukisa, kunokuba ufumane umqulu wokuxubha.
Isithuthi sakho sibhuqa ngokufaka izibambo kwiindawo ezihlukeneyo, uze uqoqe yonke into, kwaye uyihlanganise.
Iphepha eliLawulayo iPalette
Iipalletti zePhepha zithetha ukuba awukhe uchithe ixesha lokucoca i-palette yakho emva kweseshoni yokupenda, uvele utyantye uluhlu oluphezulu uze ulilahle. Ndiyifumana incedo ngakumbi xa upenda kwiindawo, apho ukucoca i-pallet kulukhuni.
Amakhadi ukuya kuPaint
Ukunikezela ngesipho esinezandla kunabantu abangakumbi kunabo nawaphi na amakhadi alungiselelwe, kwaye ngokwenene isipho ngokwawo. Le setethi yamakhadi angenanto kunye neemvulophu yenza ukwazi ukupenda amakhadi akho, nokuba yimihla yokuzalwa okanye iikholide. Ungalibali ukupenda iimvulophu!
Ukuba ungumdwebi othanda ukuzama ukufumana yonke ipenji yokugqibela kwipayipi, mhlawumbi kufuneka uzame ezinye iiPaint Saver Keys ezenza kube lula ukuxubha ityhubhu njengoko usebenzisa ipende. Ndiyayisebenzisa ukusebenzisa iibrashi zokupenda ukuze ndifake ipeyinti kodwa ngokukhawuleza ndikukwazi ukuyihambisa ngokuthe tye.
Ikhonkco yePaultover Paint okanye iMedium
Gcina nayiphi na ipeyinti okanye umbala odibeneyo owenziwe ngenye imini ngokuyifaka kwiincinci ezincinci zeplastiki. Okanye udibanise iipaliti zakho ngqo kwiibhotile kwaye usebenze kulezi zinto kunokuba ube nepalethi; ukulungiswa kuyo kuba lula kuba uvele uhlasele kwiibhondi kwaye usuphelile. Ndiyakuthanda ukusebenzisa izimbiza ezincinane kuma-acrylic mediums, ukuthulula kancane kwibhotile enkulu.
Iphepha le-Collage okanye uLuhlu lwezobugcisa
Nayiphi na isicatshulwa esithandayo i-collage okanye udaba lwezobugcisa luya kujongwa ipakethe yamaphepha amahle ukusebenzisana nayo. Kwaye akukho nto enjengokungena kakhulu!
Umqhubi wePalette ubambelela phantsi kwepalethi ngoko kulula ukubeka isandla esinye. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Le ngenye yala ma-gizmos amancinci angenza ubomi bube lula. Unamathele phantsi kwephalethi yakho, faka iminwe (okanye ezimbini) ngokubamba iqhosha, qinisa njengoko kufunekayo kwaye unokubamba kalula ipalali yakho ukusuka ngezantsi ngaphi na. Umnxeba ungene kwi-strap ithetha ukuba i-palette yakho ayiyi kukhayila isandla sakho, kunye neminye iminwe yakho isekela ipalali njengoko uthayipha imibala ngebhayisiki yakho ukuze ingaqhubeki. (Xa ubeka ipalalet yakho phantsi, iya kugqithisa iplati.) Ngaphezu koko »
Umqhubi weBrash. Ifoto © 2010 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Uxhaswe ngeenwele ezihlaziyiweyo zakho ukugqithiswa ngaphandle kwendlela ebhokisini lakho lobugcisa? Cue the Brush Defender! Ingcamango elula kodwa ephumelelayo evumela ukuba iinwele zime xa zikhusela. Umane uwaslayidile phezu kwebhondi kunye neenwele zebrashi. Kaninzi "
Umfanekiso © 2010 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Kutheni unganiki umngani ilayisensi yobugcisa? Phrinta ngaphandle kwiphepha lephepha eliphambili kunephepha eliqhelekileyo lomshicileli wekhompyutheni, kwaye uyibeke kwisakhelo. Kaninzi "
Indlela yokukhetha iPhepha le-Watercolor
IYunivesithi yaseMaldin, i-College Park Admissions
I-Hunter College Admissions
I-Chemtrails ngokuchasene neeNgxaki
U-Elvis Presley Umhlahlandlela: 1977
Ukuphuhliswa kokuqala kweNkqubo yeNkundla yaseUnited States
I-Manhattan College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umlilo Ophuziweyo - Imiyalelo Elula Yemibala Yemibala